User talk:Ninjastrikers - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ External links user right
၂ ESEAP Conference
၃ Feminism and modern architecture
၆ အ​ကြောင်းအရာကိုဖျက်သိမ်း​ပေးပါရန် တင်ပြခြင်း
၇ Thura u Tun Tin
၈ အင်္ဂလိပ်ဝီကီနဲ့ လင့်ချိတ်ထားတာ လွဲနေတာတွေကို ဖြုတ်ရင်
၉ လစ်တယ်(လ်)ချမ်း စာမျက်နှာအတွက်
၁၀ လစ်တယ်(လ်)ချမ်း စာမျက်နှာစိစစ်အတည်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်း
၁၁ လစ်တယ်(လ်)ချမ်း စာမျက်နှာ အတွက် တောင်းဆိုခြင်း
၁၂ လူငယ့်အားမာန်ပရဟိတအဖွဲ့ ‌‌ပေါက်ကန်ရွာ
၁၃ Community Insights Survey
၁၄ KoSi_2019.jpg ပုံအား လိုင်စင်သတ်မှတ်ပေးပါရန်
၁၅ Burmese namespaces
External links user right[ပြင်ဆင်ရန်]
Hi! Maykalay translated ဂေး ဖရန်စ်ဒယ် from enwp yesterday but we had to remove the references so the edit would be accepted. When do new users gain the ability to post external links? (Also do reach out to Maykalay, who is interested in becoming more active!) czar ၁၁:၂၂၊ ၅ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
We don't create yet the abuse filter like this one on enwiki. And she didn't add any references to ဂေး ဖရန်စ်ဒယ် while translating, I just added them. Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၂၈၊ ၆ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
Best regards, Wirjadisastra (ဆွေးနွေး) ၀၂:၃၆၊ ၁၄ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
Feminism and modern architecture[ပြင်ဆင်ရန်]
Feminism and modern architecture စာမ်က္ႏွာကို ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ အမ်ိ်ဳးသမီးအခြင့္အေရးေရးရာႏွင့္ ေခတ္သစ္ဗိသုကာဆိုၿပီး ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ မူရင္းစာမ်က္ႏွာက အမ်ိ်ဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေခတ္သစ္ဗိသုကာပညာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစာမ်က္ႏွာက မွားေနလို့အမ်ိ်ဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ဗိသုကာစာမ်က္ႏွာလို့ ေျပာင္းထားပါတယ္။ မူရင္းစာမ်က္ႏွာက အမ်ိ်ဳးသမီးအခြင့္အေရးေရးရာႏွင့္ ေခတ္သစ္ဗိသုကာပညာကို ဖ်က္လုိ့ ရရင္ ဖ်က္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ Feminism and modern architecture က side bar လိုမ်ိဳး အမ်ိ်ဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေခတ္သစ္ဗိသုကာစာမ်က္ႏွာမွာ ထည့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးပါ။ — Preceding unsigned comment added by Maykalay (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး)
ဝင်ရောက်ရေးသားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပိုနေတဲ့ စာမျက်နှာတွေ ဖျက်လိုက်ပါပြီ။ ဘေးက sidebar ထဲက ဆောင်းပါးတွေက မြန်မာဝီကီဖက်မှာ မရှိတာတွေက အတော်လေးများနေပါတယ်။ အချိန်ရရင် လုပ်ထားပေးပါ့မယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၅၅၊ ၁၉ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မိတ္ထီလာမြို့ သမိုင်းများထဲမှ ဝန်ဇင်းမင်းရာဇာ၏ အကြောင်းကို ထည့်သွင်းရေးသားပေးပါရန် အကြံပြု တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ သူထွန်း (ဆွေးနွေး) ၁၈:၀၅၊ ၂၈ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အကိုးအကား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှာဖွေလို့ရရင် ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၈:၂၉၊ ၂၉ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
၂ ) အင်္ဂလိပ်စာလုံးနှင့် အမည်တွေကို မြန်မာလို ပြန်ရေးထားတာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေပါ တွဲဖေါ်ပြမသင့်ဘူးလား။ ဥပမာ အလက် ဟုမ်း၊ ဟွမ်း ( Alec Home ) လို့ရေးထားလျှင် ပိုမကောင်းဘူးလား။ ထိုအတူ မြန်မာခေါင်းစဉ်တွေမှာလည်း အင်္ဂလိပ်ပါတွဲထည့်ဖို့ မသင့်ဘူးလား။
Bhikku U Thittila အကြောင်းကို မြန်မာလိုရေးလျှင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ တာဝန်ခံ (ဆွေးနွေး) ၀၂:၃၄၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာအမည်ဖြစ်စေ နိုင်ံခြားအမည်ဖြစ်စေ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာလိုပဲ သုံးပါတယ်။ နိဒါန်းအပိုဒ်အစမှာ အင်္ဂလိပ်အမည်နဲ့အတူ ဒေသခေါ်အမည် (ထိုင်းအမည်၊ တရုတ်အမည် စသည်) ကို ဖော်ပြပါတယ်။ အလားတူ Infobox ပါရင် infobox ထဲမှာလည်း နိုင်ငံခြားအမည်ကို ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှာ တစ်ပါတည်း မြန်မာအင်္ဂလိပ် နှစ်မျိုး မသုံးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးတိုင်းအကုန်တော့ ထည့်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ဆောင်းပါးတွေမှာ အင်္ဂလိပ်အမည် လိုက်ထည့်ဖို့ လိုနေတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး WP:TITLE မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၃၈၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
ဒါဆို Bhikku U Thittila ကို မြန်မာစာနှင့် ခေါင်းစဉ် ဥပမာ ရေးပြပါလား။ တာဝန်ခံ (ဆွေးနွေး) ၀၅:၀၈၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်မှာ ဝိသေသတွေ မထည့်တဲ့အတွက် "သိတလ" လို့သာပေးပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၄၇၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
၁၉၆၇ အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစားပွဲတော်အစား"၁၉၉၇ အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစားပွဲတော်"စာမျက်နှာအားမှားယွင်းဘာသာပြန်မိပါ၍ ဖျက်​ပေးပါရန်​တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။(ဆွေးနွေး) Kantabon (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၇၊ ၅ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
Done. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၀၊ ၅ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
Thura u Tun Tin[ပြင်ဆင်ရန်]
I suppose you are Burmese. We have been searching sources for this page to undestand if former Burma Prime Minister, who served briefly in 1988, Thura U Tun Tin (b. 1920 or 1923) is still alive. Last source dates back to 2010, when he was receivingaliterary award forahistorical biography he had written. Since then no source about him could be found. Being Burmese, you could find something more easily, or even know if he is still alive or dead and eventually provide an obituary if you can. It's not so easy to search Burmese names in the West! Thanks in advance, --Folengo (ဆွေးနွေး) ၀၉:၅၆၊ ၁၂ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
I have done some search in Myanmar language. I have seen the photo of him dated September 17, 2017 on Facebook  and BBC Burmese have news today describing him as one of the oldest living state leaders . So, I believe he is still alive. Zawthet (ဆွေးနွေး) ၁၄:၀၇၊ ၁၂ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
Thank you Ko Zaw Thet. That BBC post is the most recent news about him. Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၂၀၊ ၁၂ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
Thank you very much, guys. Nice to know the old man is still going. --Folengo (ဆွေးနွေး) ၁၅:၁၃၊ ၁၂ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
It's beenalong time since those articles (BBC article was actually copied by Wikipedia) and Facebook photos have been taken down. Do you have any update on Tun Tin? Anyhow, let me know if (inaforeseeable future) an obituary is published. Thanks. --Folengo (ဆွေးနွေး) ၁၀:၂၅၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
On 26 March 2019, Pension Department announced the increased pension for Thura U Tun Tin. According to that announcement, name of U Tun Tin didn't include "(death)" and I think he is still alive on March 2019. That's the most recent about him. If the person was death, "(ကွယ်)/(death)" and one family's name is included on the pension announcements. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၂၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
Great as usual. Thanks again. --Folengo (ဆွေးနွေး) ၁၅:၂၀၊ ၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
အင်္ဂလိပ်ဝီကီနဲ့ လင့်ချိတ်ထားတာ လွဲနေတာတွေကို ဖြုတ်ရင်[ပြင်ဆင်ရန်]
ကောင်းကောင်းနားမလည်တာရှိလို့ မေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာဝီကီထဲက တချို့ပေ့ချ်တွေက အင်္ဂလိပ်ဝီကီနဲ့ လင့်ချိတ်ထားတာ လွဲနေတာတွေကို ဖြုတ်ရင် လင့်များကိုတည်းဖြတ်ရန်ကနေ တဆင့် ဖြုတ်တာ။ ဖြုတ်လိုက်ပေမယ့် ပြုတ်မသွား ဘူး ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ ဟိုတစ်နေ့တုန်းက မြန်မာဝီကီက ကြံ့သူတော် စာမျက်နှာက အင်္ဂလိပ်က Malayan Tapir နဲ့ ချိတ်ထားတာ မှားနေလို့ (အမှန်က tapir နဲ့ ချိတ်ရမှာ) ဖြုတ်တာ မပြုတ်ဘူး။(Malayan Tapir နဲ့ ချိတ်ရမယ့် စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ မလေးကြံ့သူတော်က မြန်မာဝီကီထဲမှာ လောလောဆယ် မရှိသေးပါဘူး။) အင်္ဂလိပ်က Malayan Tapir မှာလည်း မြန်မာက ကြံ့သူတော်နဲ့ လင့်က မပြုတ်သေးတော့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာပါ ဖြုတ်မှ ရ မယ်လို့ ထင်လို့ ဖြုတ်လိုက်တာ။ ဖြုတ်တာက မြန်မာနဲ့ချိတ်ထားတာကိုတင် remove လုပ်တာ။ ဒါပေမယ့် တခြားလင့်တွေပါ ပြုတ်သွားတယ်။ (tapir နဲ့ ချိတ်လို့ ပြီးသွားပါပြီ) မှားသွားတာကို ဘယ်နေရာကနေ undo လုပ်ရမလဲဆိုတာ ရှာပေမယ့် မတွေ့တော့ မလုပ်လိုက်ရဘူး။ အရင်တုန်းက မြန်မာဝီကီကနေ အင်္ဂလိပ်နဲ့ချိတ်ထားတာ မှားလို့ ပြင်ရင် လွယ်လွယ်နဲ့ ပြင်လို့ရတယ်။ အခုကျတော့ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က ဝီကီဒေတာက တခြား user တစ်ယောက်ဆီက မက်ဆေ့ https://www.wikidata.org/wiki/User_talk:MoeZawSoe လာတော့မှ အရင်တစ်ခါကလည်း မှားသွားမှန်း သိရတယ်။ နောက် အဲဒီလို မမှားရအောင် အင်္ဂလိပ်ဝီကီနဲ့ ချိတ်ပြီးသား မြန်မာဝီကီက ပေ့ချ်တွေ လင့်မှားနေရင် ဖြုတ်ပုံဖြုတ်နည်းကို ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။MoeZawSoe (ဆွေးနွေး) ၀၀:၅၄၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (UTC)
အရင်တုန်းက လင့်ခ်ဖြုတ်ချင်ရင် Wikidata item အောက်က Wikipedia entries မှာ Edit နှိပ်လိုက်ရင် အမှိုက်ပုံးပုံလေးနဲ့ တစ်ခုချင်းဖြုတ်လို့ရတာ ပေါ်လာတယ်။ အခုအဲလိုမဟုတ်ဘဲ edit နှိပ်လိုက်ရင် လင့်ခ်အသစ်ချိတ်ဖို့နေရာပဲ ရောက်ရောက်သွားတယ်။ အကောင့်လော့ဂ်အင်မဝင်ဘဲ အိုင်ပီယူဇာအနေနဲ့လုပ်ရင်ကျတော့ ပြန်ပေါ်နေပြန်ရောဗျ။ Preferences ထဲမှာများ တစ်ခုခုလွဲနေတယ်ထင်တာပဲ။ လောလောဆယ် လင့်ခ်လုပ်ထားတာဖြုတ်ချင်ရင် အကောင့်နဲ့ မလုပ်ဘဲ IP user အနေနဲ့ပဲ ဝင်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ တကယ်လို့ လင့်ခ်ချိတ်ထားတာလွဲနေလို့ ရွှေ့ချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ gadget ထဲက Wikidata-centric အောက်က Move ကို on လုပ်ထားလိုက်တယ်။ လင့်ခ်ရွှေ့ချင်ရင် wikidata item ဘေးမှာ မြားအစိမ်းလေးနှိပ်ပြီး ကိုယ်ရွှေ့မယ့် စာမျက်နှာရဲ့ item id ကို ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲ။ အဲတစ်ခုတော့ အဆင်ပြေနေတယ်။ လင့်ခ်ကို လုံးဝဖြုတ်ပစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ အကောင့်မဝင်ဘဲ ဖြုတ်လိုက်တယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၃၂၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆို လင့်လုံးဝဖြုတ်မယ်ဆိုရင် အကောင့်မဝင်ဘဲ ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်။ တော်ကြာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တယ် ထင်သွားမှာ စိုးရတယ်။MoeZawSoe (ဆွေးနွေး) ၁၁:၂၄၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ့ သူတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်း တွေ ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ တွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ Midea တွေ မရှိတာကြောင့်ကျွန် တော်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ. ကျွန်တော့ ဆောင်းပါး လေးက အခု ​အချက်အလက်လေး တွေအရပြည့်စုံရဲ့လား စစ်ဆေးပေးပါဦးခင်ဗျMyanmar wikipedia မှာ ဒီဆောင်းပါးလေးဆက်လက်ရှိမှာလား သိချင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ့. ကျွန်တော်မသိတာတွေ ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ့Kyawkyawnanda (ဆွေးနွေး) ၀၉:၁၉၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
မဂ်လာပါ Admin. ကျွန်တော်ရေးသားဖန်တီးထားသော လစ်တယ်(လ်)ချမ်း ဆောင်းပါး လေးကို မလိုအပ်တာများဖြုတ်ပြီးပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ဆောင်းပါးလေးကို တစ်ခေါက်လောက်ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး စိစစ်အတည်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာKyawkyawnanda (ဆွေးနွေး) ၀၂:၂၅၊ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
လစ်တယ်(လ်)ချမ်း စာမျက်နှာ အတွက် တောင်းဆိုခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
မဖြတ်ပစ်ပဲ ဆောင်းပါး ကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်. လမ်းညွှန်ချက် ဘောင်ထဲရောက်အောင် ပြုပြင်ရေးသားပေးလို့မရဘူးလားခင်ဗျာ့. ရင်ထဲတော်တော်မကောင်းဖြစ်ပါတယ် Admin Ninjastrikers. သူများတကာတွေ ဆောင်းပါးတွေလို အကိုးအကား 1 ခု2ခုနဲ့ ရေးထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး. Midea တွေ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ​သတင်းတွေကိုအကိုးအကားယူပြီး ရေးထား တာတွေ ပါ. လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်း ကျွန် တော် ဖတ်ရှု့လေ့လာနေပါတယ်. လိုအပ်တာတွေ မပြည့်စုံ​တာ တွေ ရှိခဲ့ တယ် ဆိုရင်လည်း. အခုလိုဖျက်ပစ်မယ့်အစား ပြုပြင် ပြင်ဆင် ပေးစေချင်ပါတယ်. လေးစားပါတယ် ​ဗျာ.လူသစ်တွေဖန် တီးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကို အကိုးအကား မှန်မှန် နဲ့ အဓိပ္ပါယ် မှန်မှန် ရေးသားထားတယ် ဆိုရင် မဖျက်ပစ်ခင် အရင် ဆန်းစစ် ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ. Ninja chan nyein (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၅၊ ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
Hi Ninja .... I'm sorry I write in English but I am curious if you areaSysop why didn't you delete the page above without asking others to do it? Regards. DARIO SEVERI (ဆွေးနွေး) ၀၈:၄၃၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
Yes I can, but as assuming good faith, I just let the creator know that his page is going to be deleted according to CSD. Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၃၇၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
Thanks for your answer. DARIO SEVERI (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၅၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
KoSi_2019.jpg ပုံအား လိုင်စင်သတ်မှတ်ပေးပါရန်[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျွန်တော် ပုံလိုင်စင် ရွေးတာ မှားလို့ ခဏ ခဏ အဖျက်ခံရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့ပုံက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရိုက်ထားပြီး ဆောင်းပါးမှာ သုံးဖို့ စည်ဖြိုးဆီကနေလည်း ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးသားပါ။ ဝီကီမှာ ထားရှိနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ ခင်ဗျ? — Aungkyawnyein(kyaukse) (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 11:02, 27 September 2019
ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံဆိုရင် Camera EXIF meta data မပါရင် လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အခုပုံက FBMD ဆိုတဲ့ EXIF ဒေတာအရ ပုံဟာ Facebook ကပုံလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အရင်တင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာ ဖျက်ပစ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ကိုယ်တိုင်ရိုက် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံနိုင်ဖို့ Camera EXIF meta data ပါတဲ့ ပုံကို တင်ပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၂:၄၂၊ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Hello! I asked User:Htawmonzel on Incubator to provide some Burmese translations for the namespace names (like User:, User talk:, Template:, Category: etc.). Just to be safe, I would likeasecord pair of eyes to see if they look good. Could you takealook at Incubator:User talk:Jon Harald Søby#Burmese namespaces and see if everything looks correct? If it does, then I'll makeapatch for them very soon. Jon Harald Søby (ဆွေးနွေး) ၂၀:၀၂၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Ninjastrikers&oldid=486353" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၀:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။